Myitter - Page3of 63 - News and Media
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ မိုးကြိုး ဒါဇင်ပေါင်းများစွာ ပစ်လို့ လူ (၁၀၀) ကျော်သေဆုံး
June 26, 2020 Myitter 0
အိန်ဒိယတှငျ မိုးကွိုး ပဈခတျမှုကွောငျ့ လူ ၁၀၀ ကြျောသဆေုံး အိန်ဒိယနိုငျငံ ပွညျနယျနှဈခုတှငျ မကွာသေးမီ ရကျပိုငျးအတှငျးက မိုးကွိုး ဒါဇငျပေါငျးမြားစှာ ပဈမှုကွောငျ့ နိုငျငံမွောကျပိုငျးရှိ လူ ၁၀၀ ကြျော သဆေုံးခဲ့ကွောငျး တာဝနျရှိသူမြားက ပွောသညျ။ မိုးကွိုးပဈမှုကွောငျ့ ဘီဟာ ပွညျနယျတှငျ လူ ၈၃ […]
တစ်တော့ဆယ်လီ ငြိမ်းမြတ်သူအား တိုက်ခိုက်ရန်ကြံစည်နေသည့် အသံဖိုင်များထွက်ပေါ် ….
တစ်တော့ဆယ်လီ ငြိမ်းမြတ်သူအား တိုက်ခိုက်ရန်ကြံစည်နေသည့် အသံဖိုင်များထွက်ပေါ် ငိမ်းမြတ်သူအနေနဲ့လည်း “ညီမလည်းလူတစ်ယောက်ပါရှင် နောက်ဆုံးထိကြည့်ပြီး ငိုခဲ့မိပါတယ်” ဟု တစ်တော့မှာပြောပြထားခဲ့ပါတယ်။ ဖေ့ဘွတ်ခ် စာမျက်နှာတွင်လည်း ညီမကို ဘယ်လိုပဲ မုန်းတီးနေကျပါစေ ဘယ်သူ့ကိုမှ ပြန်မမုန်းတီးပါဘူး ညီမလဲ လူသားတစ်ယောက်ပဲမို့ ခံစားတတ်တယ်တစ်ကယ်လဲ ဝမ်းနည်းမိတယ် ဘယ်သူတွေ ဘယ်လောက်ပဲ တိုက်ခိုက်နေပါစေ အားလုံးကို […]
နေစရာမရှိတဲ့ အသက်(၉၃)နှစ်အရွယ် အမေအိုကို ကူညီထောက်ပံ့မှု ပြုလုပ်တော့မည် ….
နေစရာမရှိတဲ့ အသက်(၉၃)နှစ်အရွယ် အမေအိုကို ကူညီထောက်ပံ့မှု ပြုလုပ်တော့မည်(ပုံထိဖတ်ပြီး အားလုံးသိအောင် ကူညီမျှဝေပေးပါအုံး) အဖွားဒေါ်ဂေါင်းစိမ်းအတွက် အိမ်ရတော့မည်ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ပုသိမ်မြို့နယ်၊အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ဆင်းသီရိ(၄)လမ်း၏တစ်ဘက်ကျူးကျော်မြေနေရာတွင်နေထိုင် လျက်ရှိသောအသက်(၉၃)နှစ်အရွယ်ရှိအဖွားဒေါ်ဂေါင်းစိမ်း အတွက်စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေစေရန်ပုသိမ်မြို့နယ် SH-အထူးဟစ်တိုင်သတင်းအေဂျင်စီအဖွဲ့၊ SH-သတင်းနှင့် ကူညီမှုအဖွဲ့မှဦးအုပ်ကြီး(ခ)ဦးခင်မောင်သန်းနှင့်ပုသိမ်မြို့ရှိ လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်လျက်ရှိသော လူငယ်များပူးပေါင်းပြီးအလှူရှင်များ၏မေတ္တာစေတနာကြောင့်(၂၆.၆.၂၀၂၀)ရက်နေ့မှစ၍မတည်အလှူရှင်တစ်ဦး၏ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့်ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး အိမ်တစ်လုံးစတင်ဆောက်လုပ်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ကျွန်တော်တို့ကအသက်(၁၀၃)နှစ်ဆိုပြီအရင်သိတာပါ၊ နိုင်ငံတော်ကထောက်ပံ့ငွေမရတာကြောင့်ရရှိစေချင်တာပါ၊ SH-ကူညီမှုအဖွဲ့ကကိုခင်မောင်သန်းဦးဆောင်ပြီး အဖွားအတွက်သန်းခေါင်းစာရင်း၊မှတ်ပုံတင်တွေ လဝကမှာသွားလုပ်တော့အသက်အမှန် (၉၃)နှစ်ပြည့်တော့မယ်ဆိုတာသိရတာပါ၊ ဒီနေ့မှာတော့ အသက်(၈၅)နှစ်ပြည့်နိုင်ငံတော်မှ […]
ဆေးရုံနဲ့ဝေးလို့ သဆေုံးခဲ့ရတဲ့ ဇနီးသညျအတှကျ ရညျစူးပွီး ဆေးရုံနဲ့နီးအောငျ ၂၂နှဈလုံးလုံး တောငျကိုဖွိုပွီး လမျးဖောကျခဲ့သူ . . .
ဆေးရုံနဲ့ဝေးလို့ သဆေုံးခဲ့ရတဲ့ ဇနီးသညျအတှကျ ရညျစူးပွီး ဆေးရုံနဲ့နီးအောငျ ၂၂နှဈလုံးလုံး တောငျကိုဖွိုပွီး လမျးဖောကျခဲ့သူ Dashrath Manjhi ဆိုတဲ့ အမြိုးသားဟာ လူအမြားက မဖွဈနိုငျတဲ့ အရာကို လုပျခဲ့လို့ သူ့ကို အရူးလို့တောငျ လှောငျပွောငျခံခဲ့ရပါတယျ။ သူဟာ ဘာစကျယန်တရားမှ မပါဘဲ လကျလုပျ ပစ်စညျးတှနေဲ့ ၂၂ […]
ရဲမေ တှကေို ရာထူးတိုးပေးမယျဆိုပွီး ခွတေျောတငျတဲ့ ရဲရာထူးခနျ့ခြူပျ ဇျောမိုးသနျးနဲ့ ပကျသတျပွီး နောကျဆကျတှဲ သတငျးထှကျပျေါ . . .
ရဲမေ တှကေို ရာထူးတိုးပေးမယျဆိုပွီး ခွတေျောတငျတဲ့ ရဲရာထူးခနျ့ခြူပျ ဇျောမိုးသနျးနဲ့ ပကျသတျပွီး နောကျဆကျတှဲ သတငျးထှကျပျေါ ရဲရာထူးခနျ့ခြူပျ ဇျောမိုးသနျး (စဈတက်ကသိုလျ အပတျစဉျ ၂၆ ဆငျး)ရဲမေ တှကေို ရာထူးတိုးပေးမယျဆိုပွီး ခွတေျောတငျနသေတဲ့။ ကိုလှရှအေမှု မောငျဒငျ့ကိုပတျပွီ။ ။ ဒီစာဟာ ကြှနျတေျာ့မေးလျထဲကို ရောကျလာတာ နှဈကွိမျရှိပါပွီ။ […]
ပန်းတနော်တွင် ၉ နှစ်ကလေးအား အဆိပ်ကျွေးသတ်ပြီး ရွှေနားကပ်လုယူသူကို ဖမ်းမိ . . .
ပန်းတနော်တွင် ၉ နှစ်ကလေးအား အဆိပ်ကျွေးသတ်ပြီး ရွှေနားကပ်လုယူသူကို ဖမ်းမိ ပန်းတနော်မြို့နယ်တွင် အသက် ၉ နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်ကို အိမ်နီးချင်းက အဆိပ်ကျွေးသတ်ကာ နားကပ်ချွတ်ယူခဲ့သည်ဆိုမှုကို ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း ဇွန် ၂၅ ရက်နေ့တွင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သိရသည်။ ဇွန် ၁၉ ရက်နေ့ တွင် ရေပေါ်ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု၊ […]
အဖေကို သိန်း (၂၄၀) တန် ကားအသစ်တစ်စီး ဝယ်ပေးလိုက်တဲ့ ဖြူဖြူထွေး ….
အဖေကို သိန်း (၂၄၀) တန် ကားအသစ်တစ်စီး ဝယ်ပေးလိုက်တဲ့ ဖြူဖြူထွေး ဖြူဖြူထွေးဆိုတာ လွန်ခဲ့တဲ့ အချိန်အနည်းငယ်ကမှ အက ဗီဒီယိုလေးတွေ၊ ဟာသ ဗီဒီယိုလေးတွေနဲ့ နာမည်ကျော်ကြားလာပြီး ပရိသတ်တွေရင်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာဗျူးတွေဖြေရင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဟက်ဟက်ပက်ပက် ဖြေတတ်တဲ့ဖြူဖြူထွေးကို ချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေက အခိုင်အမာရှိနေတာဖြစ်ပြီး ဖြူဖြူထွေးရဲ့အနုပညာကို […]
ခငျြးပွညျနယျ၏ ပထမဆုံး လယောဉျကှငျးဖွဈသညျ့ ဖလမျး(ဆူရျဘုနျ)လယောဉျကှငျးတှငျFly Check ဖွငျ့ ပထမဆုံးပြံသနျး
June 25, 2020 Myitter 0
ခငျြးပွညျနယျ၏ ပထမဆုံး လယောဉျကှငျးဖွဈသညျ့ ဖလမျး(ဆူရျဘုနျ)လယောဉျကှငျးတှငျ ဇှနျ ၂၅ ရကျက ပထမဆုံးအကွိမျ တပျမတျော လယောဉျဖွငျ့ Fly Check ပြံသနျးခဲ့သညျ။ “ဆူရျဘုနျလယောဉျကှငျးဟာ ငှကေပျြ ၃၄ ဘီလီယံအကုနျကခြံပွီးတော့မှ ၉၈ ရာခိုငျနှုနျးပွီးနပွေီ။ ဒီနပေဲ့ စမျးနပွေီ။ သုံးရကျလောကျ လုပျမယျ။ အဲဒီ Result […]
သရုပျဆောငျ ခဈြသူ့ဝနှေငျ့ ၎င်းငျး၏ ဖခငျ ဦးဇျောဝငျးကို ရှနေ့ကွေီး ဦးအေးပိုငျမှ တရားစှဲဆိုလိုကျပွီ . . .
သရုပျဆောငျခဈြသူ့ဝနှေငျ့၎င်းငျး၏ ဖခငျ ဦးဇျောဝငျးကို ရှနေ့ကွေီး ဦးအေးပိုငျမှ တရားစှဲဆိုလိုကျပွီ သရုပျဆောငျခဈြသူ့ဝနှေငျ့၎င်းငျး၏ ဖခငျ ဦးဇျောဝငျးကို အမြိုးသားရေးအဖှဲ့ ရှနေ့ကွေီး ဦးအေးပိုငျမှ တရားစှဲဆိုလိုကျပွီ ပနျခြီကားရေးဆှဲရာ၌ ဘာသာရေးနှငျ့ ပတျသကျ၍ အကွောငျးအရာမြားကွောငျ့ သရုပျဆောငျခဈြသူ့ဝနှေငျ့၎င်းငျး၏ ဖခငျ ဦးဇျောဝငျးကို အမြိုးသားရေးအဖှဲ့ ရှနေ့ကွေီး ဦးအေးပိုငျမှ တရားစှဲဆိုထားကွောငျး သင်ျကနျးကြှနျးမွို့နယျရဲတပျဖှဲ့တာဝနျရှိသူမြားက […]
စိုက်ပျိုးစရိတ် မရရှိတဲ့ လယ်သမား (၅၀) ကျော် ကို အတိုးမဲ့ သိန်း(၅၀၀) ကျော်ထုတ်ချေး ပေးတဲ့ ဆန်စက် လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦး
စိုက်ပျိုးစရိတ် မရရှိတဲ့ လယ်သမား (၅၀) ကျော် ကို အတိုးမဲ့ သိန်း(၅၀၀) ကျော်ထုတ်ချေး ပေးတဲ့ ဆန်စက် လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦး ( ဗီဒီယိုဖိုင် ) နိုင်ငံတော်က ထောက်ပံ့တဲ့ မိုးစပါး စိုက်ပျိုးစရိတ် မရရှိတဲ့ လယ်သမား (၅၀) ကျော်ကို မြိတ်မြို့က ဆန်စက် […]